Yintoni ifom ye-US Open Playoff?
Yintoni eyenzekayo xa i-US Open iboshwe emva kwezimbobo ezingama-72
I- US Open iyintambo yegalufu engama-72. Kodwa kwenzekani ukuba ngaba babini okanye abadlali begalufu baxhomekeke ekukholeni emva kweemidlalo ezine zokudlala? Badlala imingxuma emibini-mhlawumbi ngakumbi xa behlala beboshwe.
Ifomathi yangoku ye-US Open Playoff Format
Ukususela ngowama-2018, i-USGA yatshintshile ukusuka kwi-hole-hole engama-18 ukuya kwimiba emibini, i-playoffs yamanqaku angamaqela. Nawaphi na ama-golfers abophelelwe emva kwezimbobo ezingama-72 zokudlala ziqhubeka kwezinye iindawo ezimbini.
Iimpawu zazo ezidibeneyo kulezo zimbobo ezimbini zifumana umqoqo.
Yaye ukuba ngaba i-golf okanye ezimbini zegalufu zihlala ziboshwe emva kwezi zimbobo ezimbini? Baqhubeka bedlala ngefomati yokufa ngokukhawuleza, kude kubekho omnye wabo ophumelela umgodi, ngoko ke, umdlalo.
Kanye emva kwexesha, bonke abane abanezakhono eziphezulu kwiigalufu zamadoda basebenzisa i-playoffs engama-18. Kule minyaka, abanye abathathu - I-Masters , iBritish Open ne- PGA Championship - yashiya i-holer 18 kwaye iguqule kwiifom ezifutshane.
Kodwa i-USGA inamathele ngosuku olongezelelweyo lomdlalo, efuna i-playoff egcweleyo eyi-18. Kuze kube ngowama-2018, xa ukutshintshela kwimijelo emibini, ifomathi yamanqaku ahlangeneyo yenziwe.
Ziziphi izimbobo ezisetyenziselwa kwisigxina semigxobhozo esekelwe kwinqanaba legalufa elisetyenziswayo kunye nokusekwa kwalo, kwaye lizimisele ngonyaka ngamnye ngaphambi kokuqala kwe-US Open.
Indlela US Open Open Format
Ifom ye-US Evulekile evulekile ishintshile amaxesha ambalwa ngeminyaka.
Kwiminyaka yokuqala yemidlalo - ekupheleni kwe-1800s, ekuqaleni kwe-1900s - i-18-hole hole. Kodwa ukuba abathathi-nxaxheba bebanamathele emva kwe-18 eyongezelelweyo, badlala nezinye izimbobo ezili-18. Oku kubangele ukuba ezinye iiplothi zihamba ngezimbobo ezingama-36 (yokuqala 18, ziboshwe, ke enye inye-18), eyaqala ukuqala ngo- 1925 US Open .
Emva koko i-USGA yatshintshela kwi-hole engama-36 ngokuyila. Okokuqala kusetshenziswe kwi-1928 US Open. Kodwa emva koko kwenzeke ngo-1931 umqhudelwano - uchazwe ngezantsi - i-USGA yabuyela emuva kwifom ye-18-hole ngo-1932 phambili. Nangona kunjalo, bagcina i-proviso ukuba xa abagadi begalufu bebanamathele, badlala i-18 yesibini.
Ukufa ngokukhawuleza akuzange kungene emfanekisweni ngethuba lokuqala ukuya ngowe-1990 US Open, xa i-USGA ishintshela kwisigxina esingama-18 esilandelayo ngokufa ngokukhawuleza ukuba abagadi begalufu beboshwe.
Kwaye, ekugqibeleni, ngowama-2018, i-USGA iya kwimeko ekhoyo yangoku, ifomathi yamanqaku onke.
Ngelo xesha i-US Vula i-Playoff ehleliyo yamaHolesi angama-72
Ngoko kwenzeka ntoni ngo-1931 US Open? Njengoko kuphawuliwe, i-USGA yaqalisa ukusebenzisa ifomathi engama-36 (izimbobo ezili-18 ekuseni, enye inye-18 ngemini) kwiminyaka ye-1920. Kodwa ukuba abagadi begalufu babesayiboshwe emva kwezi zimbobo ezingama-36? Badlala elinye i-36-pit hole .
Kwaye kwenzeka kanye kanye, ngo-1931 umqhudelwano. Ngaloo nyaka, abathathi-nxaxheba ababethebileyo uBilly Burke noGeorge Von Elm banqamle ukudlala i-72-pit hole. I-72-hole pit hole elandele umdlalo we-72-hole-144 imigodi kulowo nyaka. Jonga yethu 1931 I-US Open open recap malunga neenkcukacha.
ANA Ukuphefumlelwa, i-LPGA Major Championship
I-Open Senior Women, i-Golf New New Championship
6 I-Masters kakhulu kunazo zonke zeGolfers ze-All Time
I-Greenbrier Classic kwi-PGA Tour
I-PGA Tour kaZurich Classic iya kwiFomathi yeFomathi ngo-2017
Ixesha leeMatters Tee kunye neePairings zichaniwe?
I-Sony Vula kwi-Tournament yaseHawaii
Imfazwe yaseMexico naseMelika
Indlela Yokuqalisa I-Skydiving
Ziqhelise ekuKhankeni iIgqeba eziLungileyo
I-Huston-Tillotson kwiYunivesiti yokuBamkela
IYunivesithi yase-Indianapolis Admissions
Amanqaku e-Piano - Naturals & Accidentals
Iziqithi ezinkulu kwihlabathi
Ungakha njani iRC Dragster?
Izikhawulelo zokufikelela kwiNkcazo yokuSiza koLuntu
I-French Common Mistake - Ndingumdla (e) ngaphakathi
Ukuphononongwa: Superman # 51
IMfazwe Yehlabathi II: uMarshal Georgy Zhukov
Isikhokelo soMqokeleli oQekelekileyo kwisiKhokelo seTV
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi soMlomo 'Entender' ('ukuqonda')
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yeeNxweme ezimhlophe
Iintlobo ezi-3 zoBomi boBomi
UkuQinisekisa okuKhuselekileyo kwiingubo zasebusika